Vonoan’olona feno habibiana: teratany frantsay sy ny vady aman-janany hita faty tao an-tranony | NewsMada
Francisco Perez, 64 taona, teratany frantsay avy any Guadeloup ilay raim-pianakaviana, izay manambady vehivavy malagasy antsoina hoe Soa Monica, 48 taona. Vao fito taona monja koa ilay zazalahy, natsangan’izy ireo. Tao amin’ny trano fidiovana, tao amin’ny tokantranony, ao amin’ny fokontany Depot 4, Toamasina, no nahitana ny fatin’izy telo mianaka ireto, ny alatsinainy 13 mey teo. Vonoan’olona feno habibiana…
Hita faty vao maraina tao an-tokantranony ao amin’ny fokontany Depot 4 parisela 23/44, ny alatsinainy teo ireto telo mianaka ka teratany frantsay avy ao Guadeloupe i Francisco Perez, 64 taona ilay raim-pianakaviana raha 48 taona kosa ramatoa vadiny, antsoina hoe Soa Monica ary ny zanany lahikely vao 7 taona monja, mpianatra ao amin’ny Lycée frantsay ao Toamasina. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, ny 20 mey ho avy izao no efa nikasa hiverina any ivelany ilay teratany frantsay ary ny desambra ho avy izao no efa hikasa hanao mariazy izy mivady ireto. Raha ny fahitana ny razana, efa simba tanteraka ny fatin’izy telo mianaka ary tamin’ny alalan’ny fofona maimbo nivoaka tao amin’ilay trano no nahasarika ny fokonolona nilaza tamin’ny manodidina. Nantsoina ny sefo fokontany sy ny polisy sy zandary ary ny fianakavian’ilay ramatoa tompon-trano. Mihidy gadena avy ao anatiny ny varavarana tamin’ny fahatongavan’ireo olona ireo. Tsy hita tao an-toerana kosa ny mpiambina ka niroso tamin’ny famakiana ny varavarana rehetra ny mpitandro filaminana. Akory ny hatairan’ny rehetra fa nihanahery vaika ny fofona maimbo. Nikorontana ny entana rehetra tao an-tokantrano ary tany amin’ny efitra fidiovana no nahitana ny fatin’izy telo mianaka efa lo sy simba tanteraka. Araka ny fanadihadiana savaranonando nataon’ny polisy sy zandary, ahina ho niharan’ny fanolanana tambabe ilay renim-pianakaviana mialoha ny namonoana azy. Tsy nisy akanjo rahateo ny tapany ambany tamin’ny fotoana nahitana ny razana.
Olona efa voasambotra…
Ny fanadihadiana no nahalalana fa efa novonina hatramin’ny 8 mey lasa teo izy telo mianaka ireto. Mbola hita teo ambony latabatra ny kahien’ilay ankizilahikely misy datin’ny 8 mey teo. nilaza ihany koa ny anadihan’ilay renim-pianakaviana fa mbola nifampiresaka tamin’ilay vazaha izy, ny talata 7 mey, ny alakamisy, zoma ary ny asabotsy. Niverina niantso izy fa tsy nisy nandray intsony ny telefaonina ka nihevitra ho an’ny amin’izy ireo tamin’io alatsinainy io, saingy ny fatin’izy telo mianaka no novantaniny. Nilaza ity zaodahin’ilay vazaha ity fa vao iray volana teo no nipetrahan’izy telo mianaka ireto tao amin’ity trano ity ary mbola eo am-panamboarana fa mbola tsy vita tsara ny rihana ambony raha nanofa trano foana izy ireo teo aloha. Tsy fantatra mazava ny tena anton’izao vonoan’olona mahatsiravina izao fa fantatra kosa izao fa olona efatra no efa nosamborina, ny alatsinainy hariva teo ihany. Anaovana fanadihadiana ireto mpiasa manamboatra ny tranon’izy mivady ireto raha karohina kosa ilay mpiambina ny tanàna izay heverina ho tena atidoha nikotrika izao vonoan’olona mahatsiravina izao. hita tao amin’ny tranon’ny mpiambina rahateo ny poketran’ilay renim-pianaviana sy ny telefaonina finday tsy misy puce ary solonify sy faritra nihosin-dra. Hitodika any Toamasina indray, araka izany, ny mason’izao tontolo izao manoloana izao fisiana teratany frantsay maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana izao. Andrasana ny tohin’ity raharaha vonoan’olona ity.